Gudoomiye Tarsan oo sharci darro ku tilmaamay go’aankii ay soo saareen guddiga doorashada dalka (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Gudoomiye Tarsan oo sharci darro ku tilmaamay go’aankii ay soo saareen guddiga doorashada dalka (DHAGEYSO)
Gudoomihii hore ee gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa si kulul u dhaleeceeyay go’aankii Guddiga doorashada dalka ay dhawaan kasoo saareen xilliga rasmiga ah ay dhaceeyso doorashada sanadkaan 2016-ka.
Tarsan oo wareysi siiyay mid ka mid ah idaacadaha magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dastuurka dalka uusan ku qorneyn in guddiga doorashada ay dib u dhigi karaan, xilliga rasmiga ah ee shaci ahaan la qaban lahaa doorashada, balse sheegay inay xaq u leeyihiin soo jeedin kaliya.
Wuxuu sidoo kale sheegay in xilliga baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu xilligiisa uga ek-yahay 20-ka bishaan, wixii xilligaasi ka dambeeyo lasoo dhiso baarlamaan cusub, halka tan madaxweynahane ay iyadane ku ek-tahay 9-ka September.
“Waxaan u aragnaa sharci darro in xilliga baarlamaanka iyo hay’addaha dastuuriga oo waqtigooda sii dhamaanayo muddo laba bilood ah loogu darro, waana nasiib darro in madaxda dalka ay iyaga noqdaan kuwa dastuurka dalka aan ku dhaqmin islamarkaana qof aan dastuurka dalka u degsan ku dhaqmaynin uu yahay qof aan la aamini karin”. Sidaas waxaa yiri Maxamuud Axmed Nuur Tarsan.